၁ သိန်းခွဲအောက်နဲ့ Honor 7S ဖုန်းမှာ ဘယ်လို Feature တွေရနိုင်မလဲ?
17 Oct 2018 . 2:29 PM
Honor ကနေ ထုတ်ထားတဲ့ Honor 7S စမတ်ဖုန်းက လက်ရှိအချိန်မှာ ငွေကျပ် ၁ သိန်းခွဲဝန်းကျင်နဲ့ ဝယ်ယူနိုင်တဲ့ စမတ်ဖုန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုမျိုး Budget ဈေးဝန်းကျင်မှာ စမတ်ဖုန်းတွေ ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုမျိုး Feature တွေပါဝင်မလဲဆိုတာက စိတ်ဝင်စားစရာပါ။ ကိုယ်က ဈေးပိုနည်းတဲ့ တန်ဖိုးတစ်ခုကိုပေးထားပေမယ့် ပြန်ရတဲ့ Feature တွေက တကယ်တန်ရဲ့လားဆိုတာက လူတိုင်းသိချင်မယ့်အရာတစ်ခုပါ။
အဲ့ဒါကြောင့် အခု Article မှာတော့ တကယ်လို့ Honor 7S စမတ်ဖုန်းကို ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုမျိုး Feature တွေရနိုင်မလဲဆိုတာကို ဖော်ပြသွားပေးမှာပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်တုန်းက စတင်ခဲ့တဲ့ 18:9 Display ဖုန်းတွေက အခုအချိန်မှာ ဒီ Honor 7S စမတ်ဖုန်းလိုမျိုး Budget စမတ်ဖုန်းတွေမှာပါရရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက Video တွေကြည့်တဲ့နေရာမှာ တကယ်ကိုသိသာလာပြီးတော့ သာမန် တခြားသော 16:9 Display ပါတဲ့ဖုန်းတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် ပိုကောင်းလာတာပါ။
ဒါပေမယ့် Honor 7S ဖုန်းမှာ HD+ Resolution ပဲရှိတဲ့အတွက် တခြားသော ဈေးပိုကြိးတဲ့ Full HD+ Resolution ဖုန်းတွေထက်တော့ အားနည်းနေပါသေးတယ်။
Selfie ရိုက်ဖို့က အကောင်းဆုံးသော စမတ်ဖုန်းတွေမကိုင်ထားလည်း လူတိုင်းရိုက်ချင်တဲ့အရာတစ်ခုပါ။ ဒီနေရာမှာလည်း Budget စမတ်ဖုန်းအများစုမှာ ကြုံရသလိုပဲ ညဘက်အလင်းရောင်ကောင်းကောင်းမရတဲ့အချိန်မှာ Selfie ပုံကောင်းကောင်းရိုက်ဖို့က ခက်ခဲနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Honor 7S မှာတော့ Front 5MP Camera မှာ LED Selfie-light တစ်ခုပါဝင်တဲ့အတွက် တကယ်လို့ ညဘက်မှာ Selfie ရိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း Honor 7S က တခြားသော Budget ဖုန်းတွေထက် ပိုသာနေနိုင်ပါတယ်။
Dual SIM အပြင် MicroSD Card ထည့်နိုင်ခြင်း
Honor 7S ဟာ Internal Storage အနေနဲ့ 16GB ပဲ ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် ဖုန်းမှာ Storage များများထည့်သွင်းချင်တဲ့သူတွေဆိုရင် Storage ကို MicroSD Card ကနေ ထပ်မံထည့်သွင်းနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကလည်း တခြားသော စမတ်ဖုန်းတွေလိုမျိုး SIM2Slot မှာ ထည့်သွင်းရတာမဟုတ်ဘဲ SIM ၂ ကဒ်အပြင် သီးသန့် Slot တစ်ခုအနေနဲ့ အသုံးပြုရတာဖြစ်တဲ့အတွက် Dual SIM Function ကို မထိခိုက်ဘဲ သုံးနိုင်ဦးမှာပါ။
ဒီ Feature တွေကတော့ ငွေကျပ် ၁ သိန်းခွဲအောက် စမတ်ဖုန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Honor 7S ဖုန်းမှာ ရရှိနိုင်တဲ့ Feature အချို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Feature တွေက Honor 7S ကို ပိုပြီး အားသာချက်တွေရရှိနိုင်နေပေမယ့် Honor 7S မှာလည်း တခြားသော စမတ်ဖုန်းတွေနည်းတူပဲ အားနည်းချက်တွေရှိနေပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီဈေးဝန်းကျင်မှာတော့ Honor 7S က တော်တော်လေးကို စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းမှာ သုံးထားတဲ့ Mediatek Processor ကြောင့် အားနည်းတယ်ဆိုပေမယ့် ဈေးအရတော့ တန်တယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
Honor ကနေ ထုတျထားတဲ့ Honor 7S စမတျဖုနျးက လကျရှိအခြိနျမှာ ငှကေပျြ ၁ သိနျးခှဲဝနျးကငျြနဲ့ ဝယျယူနိုငျတဲ့ စမတျဖုနျးတဈခုဖွဈပါတယျ။ အခုလိုမြိုး Budget စြေးဝနျးကငျြမှာ စမတျဖုနျးတှေ ဝယျယူမယျဆိုရငျ ဘယျလိုမြိုး Feature တှပေါဝငျမလဲဆိုတာက စိတျဝငျစားစရာပါ။ ကိုယျက စြေးပိုနညျးတဲ့ တနျဖိုးတဈခုကိုပေးထားပမေယျ့ ပွနျရတဲ့ Feature တှကေ တကယျတနျရဲ့လားဆိုတာက လူတိုငျးသိခငျြမယျ့အရာတဈခုပါ။
အဲ့ဒါကွောငျ့ အခု Article မှာတော့ တကယျလို့ Honor 7S စမတျဖုနျးကို ဝယျယူမယျဆိုရငျ ဘယျလိုမြိုး Feature တှရေနိုငျမလဲဆိုတာကို ဖျောပွသှားပေးမှာပါ။
ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ နှဈကုနျပိုငျးလောကျတုနျးက စတငျခဲ့တဲ့ 18:9 Display ဖုနျးတှကေ အခုအခြိနျမှာ ဒီ Honor 7S စမတျဖုနျးလိုမြိုး Budget စမတျဖုနျးတှမှောပါရရှိလာပွီဖွဈပါတယျ။ ဒါက Video တှကွေညျ့တဲ့နရောမှာ တကယျကိုသိသာလာပွီးတော့ သာမနျ တခွားသော 16:9 Display ပါတဲ့ဖုနျးတှနေဲ့ ယှဉျရငျ ပိုကောငျးလာတာပါ။
ဒါပမေယျ့ Honor 7S ဖုနျးမှာ HD+ Resolution ပဲရှိတဲ့အတှကျ တခွားသော စြေးပိုကွိးတဲ့ Full HD+ Resolution ဖုနျးတှထေကျတော့ အားနညျးနပေါသေးတယျ။
Selfie ရိုကျဖို့က အကောငျးဆုံးသော စမတျဖုနျးတှမေကိုငျထားလညျး လူတိုငျးရိုကျခငျြတဲ့အရာတဈခုပါ။ ဒီနရောမှာလညျး Budget စမတျဖုနျးအမြားစုမှာ ကွုံရသလိုပဲ ညဘကျအလငျးရောငျကောငျးကောငျးမရတဲ့အခြိနျမှာ Selfie ပုံကောငျးကောငျးရိုကျဖို့က ခကျခဲနပေါတယျ။ ဒါပမေယျ့ Honor 7S မှာတော့ Front 5MP Camera မှာ LED Selfie-light တဈခုပါဝငျတဲ့အတှကျ တကယျလို့ ညဘကျမှာ Selfie ရိုကျမယျဆိုရငျလညျး Honor 7S က တခွားသော Budget ဖုနျးတှထေကျ ပိုသာနနေိုငျပါတယျ။
Dual SIM အပွငျ MicroSD Card ထညျ့နိုငျခွငျး
Honor 7S ဟာ Internal Storage အနနေဲ့ 16GB ပဲ ပါဝငျတာဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီအတှကျ ဖုနျးမှာ Storage မြားမြားထညျ့သှငျးခငျြတဲ့သူတှဆေိုရငျ Storage ကို MicroSD Card ကနေ ထပျမံထညျ့သှငျးနိုငျပွီဖွဈပါတယျ။ ဒါကလညျး တခွားသော စမတျဖုနျးတှလေိုမြိုး SIM2Slot မှာ ထညျ့သှငျးရတာမဟုတျဘဲ SIM ၂ ကဒျအပွငျ သီးသနျ့ Slot တဈခုအနနေဲ့ အသုံးပွုရတာဖွဈတဲ့အတှကျ Dual SIM Function ကို မထိခိုကျဘဲ သုံးနိုငျဦးမှာပါ။
ဒီ Feature တှကေတော့ ငှကေပျြ ၁ သိနျးခှဲအောကျ စမတျဖုနျးတဈခုဖွဈတဲ့ Honor 7S ဖုနျးမှာ ရရှိနိုငျတဲ့ Feature အခြို့ပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီ Feature တှကေ Honor 7S ကို ပိုပွီး အားသာခကျြတှရေရှိနိုငျနပေမေယျ့ Honor 7S မှာလညျး တခွားသော စမတျဖုနျးတှနေညျးတူပဲ အားနညျးခကျြတှရှေိနပေါသေးတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး ဒီစြေးဝနျးကငျြမှာတော့ Honor 7S က တျောတျောလေးကို စှမျးဆောငျရညျပိုငျးမှာ သုံးထားတဲ့ Mediatek Processor ကွောငျ့ အားနညျးတယျဆိုပမေယျ့ စြေးအရတော့ တနျတယျလို့ ပွောလို့ရပါတယျ။